people Nepal » फेरि यसरी बढ्दैछ काठमाडौंमा दिल्ली र बेइजिङको चासो फेरि यसरी बढ्दैछ काठमाडौंमा दिल्ली र बेइजिङको चासो – people Nepal
फेरि यसरी बढ्दैछ काठमाडौंमा दिल्ली र बेइजिङको चासो
Posted on July 23, 2017 by Durga Panta
साउन ८, काठमाडौं– दुई छिमेकीको चासोमा रहेको नेपालको राजनीतिमा फेरि नयाँ दृश्य सतहमा आउन थालेका छन् । जे–जस्ता घटनाक्रम र अभिव्यक्ति विकसित भएका छन्, लाग्छ ढिलो–चाँडो त्यसको नतिजा आउनेछ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी भैरहेको छ । यसका लागि केही समय अगाडि परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले दिल्लीको भ्रमण पनि गरिसकेका छन् । दिल्लीमा देउवालाई ‘रेड कार्पेट’ विछ्याउने तयारी भैरहँदा बेइजिङको ‘मूभ’ पनि देखिन थालेको छ ।
सीधा–सीधा भन्ने हो भने प्रचण्डको बैङ्कक भ्रमणको ‘भाग–२’ हो ओलीको मानसरोवर भ्रमण हो । औपचारिक निम्ता दिएर संवाद गर्न नसक्ने ‘प्रोटोकल’ भएका नेताहरूलाई यात तेस्रो भूमिमा बोलाएर भेट गरिन्छ, या त अन्य कुनै ब्यानरमा निम्ता गरेर । प्रचण्ड र ओलीको हकमा पनि चिनियाँ पक्षबाट भएको यही हो ।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भैसकेको, असोज २ को तेस्रो चरणको चुनावका लागि सरकारको तयारी तीव्र भएको बेला दुई छिमेकीले नेपालको राजनीतिमा फेरि चासो राखेजस्तो देखिन्छ । दिल्लीसँगको दूरी निटक पार्न प्रधानमन्त्री देउवाका ‘दूत’ सक्रिय नै देखिन्छन् । काठमाडौँमा दिल्लीका ‘दूत’को आवत–जावत बाक्लो छ ।
राजनीतिमा पर्दाभित्र जे जस्ता घटनाक्रम हुन्छन्, पर्दा बाहिर बहुतै कम मात्र देखिन्छन् । पछिल्लो उदारणका रूपमा विपक्षी पार्टी एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई हेर्न सकिन्छ । एमाले र ओलीको सचिवालयले ओली मानसरोवर जान थालेको भनेर प्रचार गर्यो । विश्वभरका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मालम्बीको तीर्थस्थल मानसरोवर भ्रमणका लागि ओली सपरिवार जान थालेको समाचार आयो ।
गत वर्ष देउवाले पनि यस्तै कार्यक्रमका लागि गोवा गएका थिए । दिल्लीमा उनले राजनीतिक महत्वपूर्ण भेट गरेर फर्केका थिए ।
हिजो ओलीसँगै पत्नी, स्वकीय सचिव र चिकित्सक पनि भ्रमणमा निस्के । लगत्तै समाचार आयो ओली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको निमन्त्रणामा ओली चीन भ्रमण गएका हुन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका बरिष्ठ नेताहरूसँग ओलीले दुई पक्षीय हितका बारेमा छलफल गर्दैछन् । राजनीतिमा पर्दाभित्र र पर्दाबाहिर हुने खेल बुझ्न यो राम्रो उदारण हो ।
भरपर्दो राजनीतिक सूत्रहरूलाई मान्ने हो भने बैङ्कक भ्रमण प्रचण्डका लागि सीताको उपचार देखाउने प्रयोजन मात्रै थियो, जस्तो कि ओलीको मानसरोवर । बैङ्ककमा प्रचण्डले चिनियाँ राजनीति व्यक्तित्वसँग संवाद गरेका थिए ।
यस्तै अर्को उदारण छ, प्रचण्डको बैङ्कक भ्रमणको । असार २८ गते प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि बैङ्कक गएका थिए । यसअघिकै कार्यतालिकाअनुसार पत्नी सीताको फलोअपका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको उनको सचिवालयको भनाइ थियो । उनी तीन दिनपछि काठमाडौंँ फर्के । लामो समयदेखि उच्च रक्तचापलगायतका समस्याबाट पीडित सीताको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणबाहेक अन्य कुनै कार्यसूची नरहेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको थियो ।
उपचारमा गएकी सीतासहित बैङ्ककमा घुम्दै गरेको फोटो सार्वजनिक भयो । फोटो प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालले फेसबुकमा राखेका थिए, जसलाई लिएर ‘बैङ्ककमा यस्तो उपचार’ भन्दै आलोचना पनि भयो ।
ओली र प्रचण्डसँग चीनले जे अपेक्षा गरेको थियो, त्यसको कार्यन्वयनमा अहिले चिनियाँ चासो देखिन्छ । ०७३ चैतमा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल र चीनबीचमा भएका दुई पक्षीय हितका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, जसलाई चीनले चासोको साथ हेरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पाला भएका चिनियाँ पक्षसँगको सहमतिको कार्यान्वयनमा पनि चीनको उत्तिकै चासो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा के काङ्ग्रेस–माअ‍ोवादी गठबन्धनको सरकारबाट अहिले ती सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन सम्भव छन् ? नभए, अबको राजनीतिक विकल्प के ? चिनियाँ पक्षले यो विषयमा संवाद गर्न खोजेको हुन सक्छ ।
चीनसँग भएका सहमतिको कार्यन्वयन र वर्तमान काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकार ओलीको भ्रमणको बेला हुने मुख्य विषय हुन् । बैङ्ककमा चिनियाँ पक्षले प्रचण्डसँग केही आश्वस्त खोजेको हुन सक्छ र त्यस्तै प्रतिबद्धता ओलीबाट पनि चाहेको हुन सक्छ ।
गत वर्ष एमाले–माअ‍ोवादी गठबन्धनको सरकारलाई चिनियाँ सद्भाव रहेको रूपमा हेरिएको थियो । खास गरेर भारतले यसमा ठूलो चिन्ता जनाएको थियो र प्रचार पनि गरेको थियो ।
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पार्टी महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरू र चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरेका थिए । धार्मिक यात्रामा निस्कने नेतालाई विमानस्थलको कर्मचारी बिदाइमा नजान सक्थे ।
प्रचण्डको बैङ्कक भ्रमणपछिको अभिव्यक्ति र ओलीले आफ्नो निवासमा राखेको मतलाई यी भ्रमणसँग जोडेर हेर्ने हो भने प्रश्न गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् । बैङ्कक र मानसरोवर भ्रमणसँग साउन २ गतेको प्रचण्डको र साउन ३ गतको ओलीको अभिव्यक्तिलाई जोड्ने हो भने ‘दालमा केही कालो’ छ जस्तो देखिन्छ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनामै उनको भविष्यसँग गम्भीर प्रश्न उठाउने खालका थिए प्रचण्ड र ओलीका अभिव्यक्ति । त्यसमाथि बेइजिङको सक्रियताले आशङ्का त जन्माइहाल्ने भयो ।
साउन २ गते पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारिक वैठक थियो । वैठकमा प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारिक वैठकमा सत्तागठबन्धन दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘भविष्य’का लागि चिन्ता हुने विचार व्यक्त गर्नु सामन्य विषय थिएन । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावी परिणामको समीक्षा र भावी योजना निर्माणका लागि बोलाइएको वैठकमा प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर प्रचण्डले सकारको भविष्यको विषय कोट्ट्याएका थिए । यो भनाइ प्रचण्डको बैङ्कक यात्रालगत्तै आएको थियो ।
‘मैले शेरबहादुरजीलाई चाडो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि धेरै पटक भने । कहिले के भनेर कहिले के भनेर पछाडि धकेलिरहनु भएको छ ।’ पार्टी बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अब पनि तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् गठन भएन भने सरकारमा किन बसिरहन पर्यो । हामी त काङ्ग्रेसजस्तो अलमलमा पर्दैनौँ । चाँडै निर्णय लिन्छौँ ।’ प्रचण्डले सम्भावित भविष्यको समीकरणतर्फ सङ्केत गरे, पार्टी नेताहरूबीच । कतिले बुझे, कतिले बुझेनन्, त्यो अर्को कुरा हो ।
प्रचण्डको यस्तो भनाइ आएको अर्कोदिन ओलीले पनि मुख खोले, जुन प्रचण्डको भनाइसँग तालमेल खाने खालको थियो । प्रचण्डको अभिव्यक्ति आफैमा अर्थपूर्ण थियो र प्रचण्डपछि ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति दिए, काङ्ग्रेस र देउवाका लागि यो थप चिन्ताको विषय हुन सक्थ्यो ।
ओलीको भनाइ थियो– ‘एक दुई दिनमा माओवादीका साथीलाई भन्नेवाला छु । आजको यर्थाथ र भोलिको सम्भावनाबारे भन्नेवाला छु । काङ्ग्रेससँग सती गएर चुनाव जितिँदैन । चुनाव जित्न एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ साउन ३ गते वैदेशिक रोजगार रोजगार व्यवसायी सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारी बधाई थाप्न ओली निवास गएका थिए । त्यहीँ हो, ओलीले देउवाका लागि चिन्ता हुने विचार राखेका ।
ओलीको भनाइ थियो, ‘एक दुई दिनमा माओवादीका साथीलाई भन्नेवाला छु । आजको यर्थात र भोलिको सम्भावनाबारे भन्नेवाला छु । काङ्ग्रेससँग सती गएर चुनाव जितिदैन । चुनाव जित्न एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’
ओलीले काङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादीलाई केही फाइदा नहुने भन्दै नयाँ शक्तिबाट अगाडि बढ्न आह्वान गरे, अर्थात देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको निरन्तरतामा ‘ब्रेक’को चाहना राखे । काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनले माओवादीलाई फाइदा नहुने ओलीको भनाइ थियो ।
ओलीको अभिव्यक्ति र प्रचण्डको भनाइ संयोग वा रणनीतिक हो, यो चाहिँ अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । तर, यसमा बेइजिङ ‘फ्याक्टर’ को भूमिका छ कि भन्ने चाहिँ आशङ्का हुन सक्छ । मानसरोवरको यात्रापछि ओलीको बोलिको दिशा कता मोडिन्छ, त्यो पनि अर्थपूर्ण नै हुनेछ ।
काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजाने दोस्रो तहका नेताहरूको भनाइ आएका बेला प्रचण्डले सरकारको भविष्यलाई लिएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाएका थिए । ओलीले सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगरेको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माणको गृहकार्य गरेका थिए, जसलाई एमालले दिल्लीको ‘रोडम्याप’का रूपमा अथ्र्याएको थियो ।
काङ्ग्रेससँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार प्रचण्ड ०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावपछि प्रचण्डले जेठ ९ मा राजीनामा गरेर देउवाको लागि बाटो खुला गरेका थिए । पछि, माओवादीकै समर्थनमा जेठ २३ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
प्रचण्डले ओलीसँग दोस्ती भङ्ग गरेर देउवासँग निकटता बढाएपछि माओवादी र एमालेबीचको समीकरण एक वर्ष अगाडि तोडिएको थियो । समीकरण तोडिएपछि माओवादी र एमालेवीच आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो । ओली–प्रचण्ड गठबन्धन बन्दा होस वा प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन बन्दा नै किन नहोस्, केही न केही रसायनले काम गर्छ भनेर प्रचार हुने गर्छ ।
पछिल्ला ‘मुभ’ले हाम्रो राजनीतिक दिशा र दशा कस्तो बनाउँछ, केही समय पर्खनुपर्ला ।
टेकु अस्पतालमा खोप अभियान कार्यक्रम स्थगित